Dhageysiga kuma Filayo. Istaraatiijiyaddaada Bulsheed waxay u Baahantahay 4taan Qodob ee Guusha! | Martech Zone
Dhageysiga kuma Filayo. Istaraatiijiyaddaada Bulsheed waxay u Baahantahay 4taan Qodob ee Guusha!
Khamiis, Agoosto 28, 2014 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Gabi ahaanba jeclaan farriinta halkan ka timid tafaariiqda ugu weyn ee Koonfur Afrika Woolworth. Tifatiraha Dijital Sam Wilson wuxuu ka hadlayaa sida Xisbiyada Bulshada'alaabta, Analytics iyo dhise, Waxay awood u siisaa kooxdeeda inay kaxeyso kaqeybgalka calaamadaha oo ay u gudbiso aragtiyo bulsheed oo xoog leh maamulayaasha shirkadda.
Istaraatiijiyadda Woolworth way ka baxsan tahay si fudud dhagaysto iyo kajawaabida baraha bulshada. Waxaa jira 4 cunsur oo kale oo uu xusay Sam oo ka caawiyey inay guuleystaan, dibedda iyo hoggaankooda gudaha.
Falanqaynta - helitaanka jeex iyo jajab tiro badan oo xog ah si loola socdo waxqabadka dhabta ah ee suuq geynta warbaahinta bulshada ee maalgashiga.
bartilmaameedyo - awoodda lagu falanqeeyo tartamayaashooda oo loo arko waxyaabaha ugu fiican uguna xun si ay Woolworths u qabato shaqo ka fiican ta tartameyaasha.
Reaction - awoodda ay u leeyihiin inay daabacaan oo ay kormeeraan waxqabadkooda ololaha warbaahinta bulshada.
Cadaynta ROI - waxay bixisaa stats iyo Analytics taasi waxay ka caawineysaa cadeynta soo noqoshada maalgashiga hogaaminta, iyadoo siineysa iibin dhab ah oo si toos ah loogu nisbeeyo ka qeyb qaadashada warbaahinta bulshada.
Falanqaynta Socialbakers xalku wuxuu ka caawiyaa shirkadaha inay si wax ku ool ah u cabbiraan warbaahinta bulshada, iyagoo gacan ka geysanaya sameynta go'aannada saxda ah ee ku saleysan falanqaynta isbarbardhiga bulshada ee tartamayaashaada iyo warshadahaaga. Halkan waxaa ah fiidiyow sharrax weyn oo ka mid ah falanqaynta warbaahinta bulshada xal:
Dhiseyaasha Socialbakers waxay ka caawisaa dhisida iyo daabacida waxyaabaha ka soo baxaya shaashad fudud, falanqaynta quudinta tartamada, iyo aqoonsashada hababka ugu fiican. Halkan waxaa ah fiidiyow sharrax weyn oo ka mid ah daabacaadda warbaahinta bulshada xal:
Tags: falanqayntabartilmaameedyosam wilsonfalanqaynta warbaahinta bulshadaheerarka warbaahinta bulshadabaraha bulshada ee cilmi baaristafalcelinta warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada ku soo noqo maalgashigawarbaahinta bulshada roibulshada u shaqeeyaKoonfur Afrikadhogor diiranwoolworths warbaahinta bulshada
Sidee Aaminaada iyo Habdhaqanka Iibsiga ee Onlineku u socdaan
Hadaad Xog Uruurineysid, Macaamilkaagu Wuxuu Leeyahay Filashooyinkaas
Aug 30, 2014 at 6: 20 AM
Post weyn Doug !! Waad ku mahadsantahay wadaagida, xog badan